Amahlobo angu-6 kwangu-16 omile kakhulu enzeka eminyakeni eyishumi edlule | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba, kwandisa imvamisa kanye nokuqina kwesomiso ngakho-ke, ihlobo alikwazi ukubekezelela.
Iqembu lezazi zokuma komhlaba ezivela eNyuvesi yaseZaragoza lifinyelele esiphethweni sokuthi I-6 kwezingu-16 zasehlobo ezomile ngokwedlulele okuqoshwe enyakatho-ntshonalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia kwenzeke eminyakeni eyishumi edlule. Kwenzekani uma lokhu kuqhubeka?
1 Ihlobo elomile kakhulu
2 Isomiso esengeziwe
Ihlobo elomile kakhulu
Njengoba usuvele wazibonela, ihlobo eSpain liya loma futhi lifudumele. Lokhu kudala ukuthi imvelo ithinteke kakhulu kanye nemithombo yamanzi yezindawo nayo. Ukuntuleka kwemvula kuguqula ukulingana kwemvelo okuncike ngokuphelele emanzini njengensika eyisisekelo yokusebenza kwempilo.
IYunivesithi yaseZaragoza yenze ucwaningo lapho, ngokukhula okunamandla kwezihlahla ezindala kakhulu eSpain, izamile ukwakha kabusha isimo sezulu esedlule. Izihlahla ezindala kakhulu ezaphenywa zikhomba ihlobo lase iminyaka ka-2003, 2005, 2007, 2012 nango-2013 phakathi kokushisayo okurekhodwe esikhathini esishiwo.
Isomiso eSpain akuyona into entsha. Isimo sezulu sethu asinayo imvula eningi kakhulu, noma kunjalo, inani lamanzi awayo ngonyaka livamile. Ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu, isomiso yinto eqhubeka iphindaphindeka ezindaweni zaseMedithera, futhi yize imisebenzi yabantu kanye nezinhlelo zemvelo ngokwazo zivumelane nalesi simo, ukwanda kokuvama kwabo, ubukhulu kanye namandla ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu kungathinta kakhulu ukusimama kwako konke.
Ngakho-ke, kubhekwa njengolwazi olutholwe kulolu cwaningo kubalulekile ukukwazi ukwazi imiphumela yesomiso esikhathini esizayo lapho isigaba esikhulu samahlathi aseMedithera singaphansi kokushintsha kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Amahlobo ama-6 kwangu-16 omile kakhulu enzeka eminyakeni eyishumi edlule